Siyabathanda abantu abanikela ngesikhathi sabo nemizamo yabo ekwenzeni umhlaba ube yindawo ejabulisayo nekhiqiza kakhulu. Lowo umgomo ofanele. Ngasekugcineni lokho senza isoftware esiza abantu ukuthi bafeze izinhloso zabo.
I-Plum Amazing, i-Llc yinkampani yase-US kodwa eyamazwe omhlaba esebenza ngohlelo lwe-mobileware kanye ne-desktopware kanye nezinhlelo zokusebenza ze-software kusukela ngo-2007 nangaphambi kwalokho ngaphansi kwegama leScript Software emuva ngonyaka ka-1995. Isizinda se-scriptsoftware.com satholakala ngoLwesibili, ngomhlaka 29 Ephreli 1997.
Iwebhusayithi yokuqala yeScript Software yayenziwe isipele yi- I-Internet Way Back Machine ngo-1997. Ukuhlanjalazwa ngokuphelele ngamazinga wanamuhla kepha khumbula ukuthi leli bekuyikhulu leminyaka elidlule.
IPlum Amazing igxile ekwenzeni isoftware yokukhiqiza neyezithombe ze-iOS, OS X, Android neWindows. IPlum Amazing yinkampani ephethwe ngasese etholakala e-US kepha inamahhovisi emhlabeni jikelele. Isizinda plumamazing.com satholakala ngoMgqibelo, 23 Februwari 2008.
Izinhlelo zokusebenza ze-Plum Amazing zithengiswa kakhulu kufayela le- Isitolo esimangalisayo sePlum lapha.
Izinhlelo zokusebenza ze-Plum Amazing okwamanje ezithengiswa kufayela le- I-Apple App Store ilapha.
Izinhlelo zokusebenza ze-Plum Amazing okwamanje zithengiswa I-Google Play Isitolo ilapha.
Phakathi kwesivuno samanje semikhiqizo yesoftware yePlum Amazing edayiswa kusiza sePlum Amazing kukhona iCopyPaste ®, yKey (phambilini ebizwa ngokuthi iKey), iClock ®, iWatermark®, Essential, PixelStick, SpeechMaker, PhotoShrinkr, Volume Manager, TinyCal, TinyAlarms
I-Plum Amazing futhi idala izinhlelo zokusebenza zesiteshi somsakazo ngokwezifiso ze-iPhone / iPad / AppleTV ne-Android futhi zitholakala ku-iTunes naku-Google Play. Iziteshi eziningi emazweni amaningi zithengile izinhlelo zokusebenza zokusakaza ezenziwe ngokwezifiso kusuka kuPlum Amazing futhi zijabulela ukwanda kwabalaleli. Izinhlelo zokusebenza ezifana neSwag 104.9, Alice 96.5, The River 103.7, Reno CBS Sports Radio 96.1 no 1270, Ten County 97.3 FM, Muskegon Radio 100.9 FM, 1580 KGAF Gainesville Radio, 106.9 More FM, WCRN News Talk Radio 830, Little City 97.3, iRadio Tampa Bay, OM Radio eSingapore, ZMix97, The Stinger, Abilene Radio, 180 Radio Manje futhi abaningi abengeziwe.
IPlum Amazing futhi ingumqambi wemikhiqizo esithengiselwe ezinye izinkampani ezifana ne-iView ne-iView Media Pro (ithengiselwe iMicrosoft iMicrosoft eyithengise kuPhaseOne), iChatFX (ehlanganiswe ne-iChat ohlelweni olusebenzayo lweTiger yi-Apple), idTunes (which id 'ed songs by audio and tagged them), iSearch, iCount, EasyCard (manje esine-Ohana Software), i-ProjectTimer ne-KidPix (ithengiselwe iMiSoft).
IPlum Amazing idala futhi ithengise isoftware yayo kodwa futhi yenza nomsebenzi wokuthuthukisa (ukuhlela) ezinye izinkampani. Uhlu lwabalingani bethu / lwamakhasimende ngu lapha. Uma ufuna ukuba ne-iPhone enhle, i-iPad, iMac, Win noma uhlelo lokusebenza lwe-Android olwenziwe sicela contact thina. Siyajabula ukuxoxa ngemibono yakho, ama-specs kanye nomugqa wesikhathi.
IPlum Amazing yiqembu labantu bobabili abanamakhono futhi abanentshisekelo enkulu kwezobuchwepheshe. Abantu bahlakazekile emhlabeni jikelele kepha sisebenza ndawonye kumaphrojekthi ahlukahlukene sisebenzisa amakhono ethu ngezindlela ezahlukahlukene.
Sifuna ukwenza okuningi. Uma ungathanda ukuxhasa amaphrojekthi wethu ngokujwayelekile sicela uxhumane nathi.
"Lokhu oyikho yilokho owawuyikho, futhi lokho ozoba yikho okwenzayo manje." - UBuddha